ထုတ်လုပ်သူအကောင်းဆုံး Pyrroloquinoline Quinone disodium ဆား (PQQ)
Cofttek သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံး Pyrroloquinoline Quinone disodium ဆားမှုန့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင်လစဉ်ထုတ်လုပ်မှု ၂၇၀၀ ကီလိုဂရမ်နှင့်ပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (ISO9001 & ISO14001) ရှိသည်။
Pyrroloquinoline Quinone disodium ဆား Specifications
အမည်: Pyrroloquinoline Quinone disodium ဆားမှုန့်
မော်လီကျူးအလေးချိန်: 374.17 g / mol
ဓာတုအမည်: Disodium 4,5-dihydro-4,5-dioxo-1H-pyrrolo(2,3-f)quinoline-2,7,9-tricarboxylate
နာမ်: Methoxatin Disodium၊
Methoxatin disodium ဆား
Methoxatin (disodium ဆား)
Pyrroloquinoline quinone disodium ဆား
InChI Key ကို: UFVBOGYDCJNLPM-UHFFFAOYSA-L
လျှောက်လွှာ: PQQ သည်ကိုယ်ခန္ဓာရှိဆဲလ်များကို oxidative ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် antioxidant နှင့် B ဗီတာမင်ကဲ့သို့သောလှုပ်ရှားမှုအသစ်ရှိသော cofactor တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် mitochondrial ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုတိုက်ဖျက်ခြင်းနှင့်အာရုံခံဆဲလ်များကို oxidative ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ပေးခြင်းဖြင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်မှတ်ဥာဏ်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။
Pirroloquinoline Quinone (122628-50-6) NMR Spectrum
Pyrroloquinoline Quinone disodium ဆား (122628-50-6) ကဘာလဲ။
Pyrroloquinoline Quinone disodium ဆားသည်အနည်းငယ်ပါးသောကြောင့်လူအများစုသည် PQQ disodium ဆားသို့မဟုတ် PQQ အတိုကောက်ကိုအသုံးပြုလိုကြသည်။ ၎င်းကို Methoxatin ဟုလည်းခေါ်သည်။ ဒီတော့ PQQ disodium ဆားကဘာလဲ? PQQ disodium ဆားသည် PQQ ၏ disodium ပုံစံဖြစ်သည်။ PQQ သည်ဗီတာမင်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ PQQ သည်သဘာဝဟင်းသီးဟင်းရွက်အစားအစာများ၊ သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ (သဲလွန်စ) တွင်များသောအားဖြင့် PQQ ပမာဏများစွာကိုစိမ်ပဲပုပ်ထုတ်ကုန်များတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ အစိမ်းရောင်ပဲ၊ tofu၊ rapeseed၊ မုန်ညင်း၊ လက်ဖက်စိမ်း (camellia)၊ အစိမ်းငရုတ်၊ ဟင်းနုနွယ်ရွက်စသည်တို့စသည်တို့ဖြစ်သည်။ သို့သော်များစွာသောလူတို့သည် PQQ ဖြည့်စွက်ချက်များမှတစ်ဆင့်၎င်းကိုသူတို့၏အစားအစာများတွင်ထည့်သွင်းရန်ရွေးချယ်ကြသည်။
Pyrroloquinoline Quinone disodium ဆား (122628-50-6) ၏အကျိုးကျေးဇူးများ
PQQ disodium ဆားမှုန့်ကိုသောက်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများတွင် -
mitochondria သည်ဆဲလ်အတွက်စွမ်းအင်ထုတ်ပေးပြီး PQQ သည် mitochondria ကိုပိုမိုထိရောက်စွာအလုပ်လုပ်ရန်ကူညီပေးသောကြောင့်သင်၏ဆဲလ်များ၌စွမ်းအင်တစ်ခုလုံးတိုးလာသည်။ အဆိုပါအသုံးမပြုတဲ့ဆယ်လူလာစွမ်းအင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုလွှဲပြောင်းသည်။ သင်တစ်နေ့တာပြုလုပ်ရန်စွမ်းအင်ရရှိရန်ရုန်းကန်နေရခြင်းသို့မဟုတ်သင်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုများကိုကြုံတွေ့ရပါက PPQ မှစွမ်းအင်ထပ်မံမြှင့်တင်ခြင်းသည်သင့်အတွက်အရေးပါလိမ့်မည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရသူတို့၏စွမ်းအင်နှင့်ပတ်သက်သောပြhavingနာများရှိကြောင်းအစီရင်ခံသောသင်တန်းသားများသည် PQQ ကိုသောက်ပြီးနောက်သူတို့၏ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုသိသိသာသာကျဆင်းခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သင်၏စွမ်းအင်ကိုမြှင့်တင်ရန်သင်ရှာနေပါက PQQ သည်၎င်းကိုကူညီလိမ့်မည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်လေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်သူများက၎င်းတို့သည် PQQ ကို ၈ ပတ်ကြာအိပ်ပြီးနောက်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်နိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ လေ့လာမှုမစတင်မီတွင်ဤလူနာများသည်အိပ်စက်ခြင်းပြproblemsနာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ PQQ သည်လူနာများအတွင်း cortisol (သို့မဟုတ်) စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းပမာဏကိုလျှော့ချပြီးသူတို့၏အိပ်စက်ခြင်းကိုတိုးတက်စေသည်ဟုထင်ရသည်။ PQQ ၏အိပ်စက်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုသေချာစွာလေ့လာခြင်းမရှိသေးသော်လည်းဤကန ဦး ရလဒ်များမှာအလားအလာကောင်းနေသည်။
စိတ်ဖိစီးမှုနည်းသောကြောင့်သုတေသီများသည်မှတ်ဉာဏ်ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်ကိုတွေ့မြင်လာရသည်။ ဤကိစ္စတွင် PQQ နှင့် CoQ10 ပေါင်းစပ်မှုကမှတ်ဥာဏ်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုတိုးပွားစေနိုင်သည်။ CoQ10 သည် PQQ ကဲ့သို့ခန္ဓာကိုယ်၏ mitochondria ကိုအထောက်အပံ့ပေးနိုင်သည့်အခြားအာဟာရတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူနာအတော်များများသည် PQQ နှင့် CoQ10 ကိုတစ်ခုခုသို့မဟုတ် / သို့မဟုတ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ်မကြာခဏကြည့်တတ်ကြသည်။ သို့သော်တစ်ခုကိုယူပြီးအခြားတစ်ခုကိုလျစ်လျူရှုခြင်းသည်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုပျောက်ဆုံးစေနိုင်သည်။
Pyrroloquinoline Quinone disodium ဆား (၁၂၂၆၂၈-၅၀-၆) လှုပ်ရှားမှုယန္တရား?
Pyrroloquinoline quinone (PQQ) သည် redox အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော quinone မော်လီကျူးသေးငယ်သည်၊ oxidant (antioxidant) ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ၎င်းသည် glutathione မှတက်ကြွသောပုံစံသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အတော်အတန်တည်ငြိမ်ပုံရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ကုန်ခန်းခြင်းမတိုင်မီထောင်ပေါင်းများစွာသောသံသရာကိုဖြတ်သန်းနိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်ဆဲလ်များ၏ပရိုတိန်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဆက်စပ်သောကြောင့်၎င်းသည်အသစ်ဖြစ်သည် (အချို့သော antioxidants, အဓိက carotenoids ကဲ့သို့ beta-carotene နှင့် astaxanthin, cellular specific area) တွင်တည်ရှိသည်။ သူတို့အချိုးကျပိုပြီး antioxidant အခန်းကဏ္ play ဘယ်မှာ။ Proximity ကြောင့် PQQ သည်ဆဲလ်အမြှေးပါးပေါ်ရှိ carotenoids ကဲ့သို့သောပရိုတင်းများအနီးတွင်အခန်းကဏ္ to မှပါ ၀ င်ပုံရသည်။
အရေးအကြီးဆုံးမှာ PQQ သည် mitochondria အပေါ်သက်ရောက်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စွမ်းအင် (ATP) နှင့်ဆဲလ်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုထိန်းညှိပေးသော mitochondria များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ သုတေသီများသည် PPQ ၏ mitochondria အပေါ်သက်ရောက်မှုကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လေ့လာခဲ့ပြီး PQQ သည် mitochondria အရေအတွက်တိုးပွားစေနိုင်ပြီး mitochondria ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပင်တိုးတက်စေနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ PPQ သည်အလွန်အသုံးဝင်သောအရေးကြီးသောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည် PQQ ပါ ၀ င်သည့်အင်ဇိုင်းများကိုဂလူးကို့စ်အာရုံခံကိရိယာအဖြစ်အသုံးပြုသောဂလူးကို့စ် dehydrogenase ဟုခေါ်သည်။
Pyrroloquinoline Quinone disodium ဆား (၁၂၂၆၂၈-၅၀-၆) လြှောကျလှာ
Pyrroloquinoline quinone (ယခုမှ PQQ) သည်သေးငယ်သည့် quinone မော်လီကျူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် REDOX agent ဖြစ်နိုင်သည်။ oxidants (antioxidant effect) ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ထို့နောက် glutathione ပြန်လည် အသုံးပြု၍ တက်ကြွသောပုံစံသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အတော်အတန်တည်ငြိမ်မှုရှိပုံရသည်။ ၎င်းသည်မသုံးမီသံသရာထောင်ပေါင်းများစွာကိုခံနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဆဲလ်အတွင်းရှိပရိုတင်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဆက်စပ်နေသဖြင့်အသစ်အဆန်းတစ်ခုဖြစ်သည် (အချို့သော antioxidants, များသောအားဖြင့်β-carotene နှင့် astaxanthin ကဲ့သို့သော carotenoids, အချို့သောနေရာများတွင်တည်ရှိသည်) Proximity ကြောင့်အချိုးကျစွာ antioxidant effect များပိုမိုများပြားသောဆဲလ်တစ်ခုအကြောင်း; PQQ သည် carotenoids ကဲ့သို့ဆဲလ်အမြှေးပါးတွင်ပြုလုပ်သကဲ့သို့ပရိုတင်းများအနီးတွင်ဤကဲ့သို့သောလုပ်မှုမျိုးလုပ်သည်)
Pyrroloquinoline Quinone disodium ဆား အမှုန့် ရောင်းမည်(Pyrroloquinoline Quinone disodium ဆားအမှုန့်အမြောက်အများကိုအဘယ်မှာဝယ်ယူရမည်နည်း)
ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာပရော်ဖက်ရှင်နယ် Pyrroloquinoline Quinone disodium ဆားအမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်ပြီးကုန်ပစ္စည်းများကိုအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သည်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီးတင်းကျပ်။ လွတ်လပ်သောစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်စားသုံးမှုအတွက်အန္တရာယ်ကင်းသည်။
Ameyama M, Matsushita K, Ohno Y, Shinagawa E, Adachi O (1981) ။ အက်တမ်အစုအဝေးနှင့်အက်စစ်အီလက်ထရွန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွင်းဆက်ချိတ်ဆက်မှု၊ ဓာတ်တိုးဘက်တီးရီးယားများအဓိကသဘာ ၀ ဓာတ်ဖြည့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်များပါဝင်သည့် ၀ တ္ထုအသစ် PQQ ၏တည်ရှိမှုသည်။ FEBS လက်တ်။ 130 (2): 179-83 ။ Doi: 10.1016 / 0014-5793 (81) 81114-3 ။ PMID 6793395
Haft DH (2011) ။ "ကျယ်ပြန့်စွာဖြန့်ဝေပြီးရိုင်ဗိုဇုမ်းဖြင့်ထုတ်လုပ်သောအီလက်ထရွန်သယ်ဆောင်သူရှေ့ပြေးများ၊ ရင့်ကျက်သောပရိုတိန်းများနှင့်နီကိုတီနိုပရိုတိန်းရက်ဒ်အောက်ဆိုဒ်များအတွက်ဇီဝအချက်အလက်များ" BMC Genomics ။ 12: 21. Doi: 10.1186 / 1471-2164-12-21 ။ PMC 3023750. PMID 21223593 ။